Minisiteran'ny aterineto - Fiangonan'i Kristy
"Fa fantatro ny planiko anio," hoy ny Tompo.
Jeremia 29: 11 Hamaky bebe kokoa
Ny fijinjana tena lehibe Ampirisiho ny Tompo mba hiantso anao ho amin'ny asany.
Henoy ny iray amin'ireo toriteninay
Halalino ny Baiboly amin'ny alalan'ny Courses amin'ny Baiboly
Inona no tsy maintsy ataoko mba ho voavonjy?
The fiangonan'i Kristy
Iza ireo fiangonan'i Kristy ary inona no inoan'izy ireo?
Isan-tany isika ary tsy manana foibe foibe na filoha. Ny lohan'ny fiangonana dia tsy iza fa i Jesoa Kristy (Efesiana 1: 22-23).
Ny fiangonan'ny fiangonan'i Kristy dia mahaleo tena, ary ny Tenin'Andriamanitra izay mampiray antsika ao amin'ny Finoana iray (Efesiana 4: 3-6). Manaraka ny fampianaran'i Jesoa Kristy sy ireo Apôstôliny masina isika, fa tsy ny fampianaran'ny olona. Kristianina fotsiny isika!
A Hafatry ny fanantenana sy aingam-panahy
Ianao ve mijery ho an'ny vaovao fianakaviana fiangonana hianatra sy hivavaka? Tianay ny Fantaro bebe kokoa momba anao sy ny fianakavianao. Ireo fiangonana ao amin'i Kristy dia mandray anao.
Mitady ny farany Toriteny? Henoy na maody dika mitovy ankehitriny. Access our toriteny mba hihaino avy amin'ny mpitory maromaro maneran-tany.
Henoy ny toriteny
Avia ho namanay amin'ity alahady ity mba hivavaka! Manana isika fiangonana an'arivony eran-tany ho an'ny fandeferanao. Tsidiho ireo finday anaty aterineto mba hitady fiangonana eo akaikinareo.
Mianara Momba ny Fiangonanay
Miresaka ny toerana misy ny Baiboly isika, ary mangina ny mangina ny Baiboly. Isan-tany isika ary tsy manana foibe foibe na filoha.
Read More About ny fiangonan'i Kristy
Ny lohan'ny fiangonana dia hafa noho i Jesoa Kristy (Efesiana 1: 22-23).
rehefa mitsidika antsika isika Vavaka: Amin'ny fotoam-pivavahana dia maro ny lehilahy hitarika ny fiangonana amin'ny vavaka ampahibemaso.
We Mivavaha amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana
Mihira: Hihira hira sy hira maro samihafa isika, tarihan'ny mpitarika hira iray na mihoatra. Ireo no ho feon-kira capella (tsy misy miaraka amin'ny zavamaneno).
Ny Fanasan 'ny Tompo: Isaky ny Alahady isika dia mandray ny Fanasan'ny Tompo, manaraka ny lamin' ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany.
Miaraka amin'ireo nosy 7,000 sy mponina mitombo isam-bolana 104, Filipina dia firenena lehibe sy vavahady stratejin'i Azia.
Fantaro ny fomba Mandraisa anjara
Maro ireo Filipiana miasa ao Shina, firenena Aziatika hafa, ary na dia any amin'ny faritra afovoany atsinanana aza, izay toerana misy azy ireo. Asa sy fotoana lehibe ho an'ny Solar Player.
Ny Fiangonan'ny Tompo dia tany Philippines nandritra ny taona maro noho ny ezaka nataon'ny misiona teo aloha sy ankehitriny. Misy kongregasiona 800 izao ankehitriny.
Mafana fo izahay
Ny Vatan'i Kristy
Ny fiangonan'i Kristy dia manasa anao hivavaka amin'ny Tompo miaraka amintsika. Manana toerana hanompoana an'Andriamanitra isika ary hanampy anareo amin'ny fandehanareo miaraka amin'ny Tompo. Tsidiho ny fiangonan'i Kristy ao amin'ny fiaraha-monina misy anao. Mahafinaritra foana ny manompo ny fianakavian'Andriamanitra. Raha toa ka manompo amin'ny hafa ianao dia azafady mba misalasala miantso na manoratra.
Vakio ny blôgintsika
"Ny fiangonan'i Kristy no tena nitadiavin'ny fianakaviako sy nilaiko. Feno fankasitrahana izahay amin'ny Minisiteran'ny aterineto amin'ny fizarana ny filazantsaran'i Kristy miaraka aminay. Tsara Andriamanitra!"
ny Ministera Online
Silbano Garcia, II. evanjelistra
Silbano Garcia, II. dia evanjelistra ho an'ny fiangonan'i Kristy ary izy no mpanorina ny Minisiteran'ny aterineto. Rahalahy Garcia dia nanao asa fitoriana tany California, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, New York, ary Texas. Izy koa dia nitory tany amin'ny fivoriana filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Tamin'ny volana May 1, 1995 izy dia afaka nampiasa ny Gateway voalohany Internet ho an'ny fiangonan'i Kristy maneran-tany amin'ny www.church-of-Christ.org. Ity ministera an-tserasera ity dia manohy ny asany amin'ny aterineto ho an'ny fiangonan'i Kristy eran-tany.
Ny Rahalahy Garcia dia fantatra ho Evanjelistra Internet sy mpisava lalana eo amin'ny sehatry ny Fitoriana ny Internet. Izy dia fitaovana hanampy amin'ny fiangonana an-jatony amin'ny fampiasana Internet ho toy ny fiara ho an'ny fampielezana ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy. Ny ezaky ny aterineto dia voamarik'ireo antokom-pinoana lehibe rehetra anisan'izao tontolo izao.
Mianara bebe kokoa amin'ny Minisiteran'ny aterineto